ကိုရီးယား သရုပ်ဆောင် ဆွန်းဂျောင်ကီ၏ သရုပ်ဆောင် သက်တမ်း (၁ဝ)နှစ်ပြည့် မိတ်ဆုံပွဲပြုလုပ် - Yangon Media Group
ကိုရီးယား သရုပ်ဆောင် ဆွန်းဂျောင်ကီ၏ သရုပ်ဆောင် သက်တမ်း (၁ဝ)နှစ်ပြည့် မိတ်ဆုံပွဲပြုလုပ်
ဆိုးလ်၊ စက်တင်ဘာ ၃
Descendants of the Sun ရုပ်ရှင်ကားဖြင့် နာမည်ကျော် တောင်ကိုရီးယားသရုပ်ဆောင် ဆွန်းဂျောင်ကီသည် ၎င်း၏သရုပ် ဆောင်သက်တမ်း (၁ဝ) နှစ်ပြည့် အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် ပရိသတ်များနှင့်တွေ့ဆုံပွဲအား၊ ဆိုးလ်မြို့ရှိ ကျွန်းဟီးတက္ကသိုလ် Grand Peace Palace ခန်းမ၌ စက်တင်ဘာ ၁ ရက်နေ့က ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ယင်း၌ ဆွန်းဂျောင်ကီသည် ပရိသတ်များကို နှုတ်ဆက်စကား ပြောကြားခြင်း။ မိမိဘဝအကြောင်းအား ပြောကြားခြင်းနှင့် ပရိသတ်များအား စင်ပေါ်သို့ဖိတ်ခေါ်၍ မိမိနှင့်အတူတွဲ၍ သီချင်းဆိုခြင်း။ မိတ်ဆက်ခြင်းများဖြင့် ပျော်ပျော်ပါးပါး ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည်ဟု တာဝန်ခံကျင်းပပြုလုပ်ပေး သော Blossom Entertainment က ထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်သည်။
ဆွန်း၏ ရင်းနှီးခင်မင်သော မိတ်ဆွေတစ်ဦးဖြစ်သူ ကိုရီးယားသရုပ်ဆောင် လီကွမ်ဆူးလည်း ဆွန်း၏ မိတ်ဆုံပွဲသို့ တက်ရောက်ခဲ့သည်ကို တွေ့ရသည်ဟုသတင်းများအရ သိရသည်။ ”အခုသရုပ်ဆောင်သက်တမ်း (၁ဝ) နှစ်ပြည့်ကနေ နောင် ၁ဝ နှစ် ၁ဝ နှစ်ပေါင်းများစွာ ကျွန်တော် အနုပညာနယ်ပယ်မှာ ရှင်သန်နေဦးမှာပါ။ တစ်ခါထက်တစ်ခါ ပိုမို ကောင်းမွန်အောင်လည်း ကြိုးစား နေပါတယ်”ဟု ဆွန်းက မိတ်ဆုံပွဲ၌ ပြောဆိုလိုက်သည်။ ဆွန်းဂျောင်ကီ၏ Asdal Chronicle တီဗွီဇာတ်လမ်းတွဲလည်း မကြာမီပြသတော့မည်ဖြစ်သည်။
စတီဖင်ဟော့ကင်း ဂုဏ်ပြုတေး အယ်လ်ဘမ်ကို နာမည်ကျော် ဂီတထုတ်လုပ်သူ နိုင်းလ်ရော်ဂျားစ် ထုတ်လု??
ကိုရီးယား အချစ် ဒရာမာရုပ်ရှင် On Your Wedding Day ဒုတိယအပတ်မြောက် အဖြစ် အောင်ပွဲခံပြသ၊ ရုံတင်ပြသရက် ၁၂ ?
မြန်မာပြည် ဟုန်အိမ်း ပီနံအိတ်စက်ရုံ လုပ်သားများ အကျိုးခံစားခွင့်များ ရရှိရေး အပါအဝင် အချက??